U-Alfred Molina Ophendula kabusha Udokotela I-Octopus Role Ye-Marvels Spider-Man 3 - Isiko Lopop
U-Alfred Molina Ophendula kabusha Udokotela I-Octopus Role Ye-Marvels Spider-Man 3
U-Alfred Molina ubuyela endaweni yonke yeSpider-Man, okuyiminyaka eyi-16 egcwele ngemuva kokulingisa njengoDoctor Otto Octavius ​​ngawo-2004 ISpider-Man 2 .
Ngokuvumelana ne Intatheli yaseHollywood , umlingisi oneminyaka engama-67 ubudala waseNgilandi-waseMelika uzobangisana noSpidey kaTom Holland, ozelwe izizukulwane ezimbili ezisuswe ku-web-crawler edlalwa nguTobey Maguire ISpider-Man 2 Ukubandakanyeka kukaMolina kubukeka kuwufakazela umqondo weSpidey multiverse, inkolelo-mbono eyaqala ngegiya eliphezulu ngesikhathi kumenyezelwa ukuthi uJamie Foxx uzobuye alingise indawo yakhe njengo-Electro kule filimu. Futhi okuphawuleka ukuthi Umbiko kaCollider ukuthi u-Andrew Garfield uzobuya njengoba iqembu lakhe likaPeter Parker, u-wirst Kirsten Dunst kulindeleke ukuthi aphinde abambe iqhaza lakhe njengoMary Jane.
Eminyakeni selokhu kwavezwa isithombe esivelele sikaMolina sikaDoc Oc, abakwaSonyrelin baphinde babamba iqhaza kumalungelo eSpider-Man. Ngemuva kwempikiswano esakazeke kakhulu phakathi kukaSony noMarvel, lezi zitudiyo zombili zafika esivumelwaneni esivumela uHolland's Spidey ukuthi ahlale eMarvel Cinematic Universe.
Ifilimu yesithathu ezimele yodwa yaseHolland izovela kumqondisi ofanayo no I-Spider-Man: Ukubuyela ekhaya futhi I-Spider-Man: Kude neKhaya, UJon Watts. UBenedict Cumberbatch uzovela ebolekiswe kumabhayisikobho eMarvel, endimeni yakhe njengoDoctor Strangeand njengoba sishilo, uFoxx uzophinda abambe iqhaza lakhe elibi le-Electro kumafilimu kaGarfield Spider-Man. UZendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon noTony Revolori nabo bazobuya,
bekufanele akwenze ukuze aboshwe
Le filimu entsha, esivele iqala ukwenziwa, kulindeleke ukuthi ikhishwe ngoDisemba 21 wonyaka ozayo, kuvimbela noma yikuphi ukuphithizela okuqhubekayo ngenxa yobhadane lwe-coronavirus.
ujames franco noseth rogen baboshwe 2
ongakusebenzisela ikhekhe lokudonsa ngegolide
iresiphi enhle kunazo zonke yekhekhe le-sitrobheli emhlabeni
seth rogen james franco i-movie entsha
yini oyisebenzisayo ukukala amagremu